» ब्याटल राउण्डमा को भन्दा को कम ? भाग–४ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डमा को भन्दा को कम ? भाग–४ (भिडियो)
२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०८:५३
चन्द्र घलान, २४ असोज । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्याटल राउण्ड चलिरहेको छ । डिजिटल अडिसन हुँदै ब्लाईन्ड अडिसनबाट छनौट भएका ६४ जना प्रतियोगीहरुले अहिले ब्याटलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस भिडियो सिरिजको चौथो भागमा हामीले ब्याटल राउण्डको चौथो एपिसोडमा कसले कस्तो गाए ? अनि को बाहिरिए र को सेलेक्ट भए ? यसका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । भ्वाईस अफ नेपालका बारेमा अन्य भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानलका अन्य भिडियोहरु हेर्नुहोला । हेर्नुहोस् भिडियो–
१६ औँ एपिसोडको पहिलो ब्याटलमा टिम प्रमोदबाट जमिर अली र बलबहादुर राजवंशीले प्रतिस्पर्धा गरे । ‘बस है आमा’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरुमध्ये बलबहादुर नकआउटका लागि छनौट भए भने जमिर बाहिरिए । दुबैको गायिकीलाई सबैले मन पराए । जमिरले अझै खारिएर फेरि अर्को सिजनमा आउने संकेत देखाएका छन् । त्यस्तै दोस्रो ब्याटलमा टिम आश्थाबाट सोनिया राई र जमुना बान्तावा राईले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘कोपिलामा रंग चढ्यो’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरुमध्ये जमुना राई नकआउटका लागि छनौट भएकी छिन् । निकै नै सुमधुर आवाज भएकी सोनिया राई ब्याटलबाट बाहिरिईन् ।
१६ औँ एपिसोडको तेस्रो ब्याटलमा टिम दिपबाट सुरज प्रताप सिंह र पृथ्वी खनालले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘भुलुँ भुलुँ लाग्यो मलाई’ बोलको गीतमा भएको यो ब्याटलमा पृथ्वीले बाजी मार्दै नकआउटका लागि छनौट भए । उत्तिकै दमदार आवाज भएका सुरजप्रतापले आफु आवाजको यात्रामा अब्बल भएको सावित गरिदिए । उनीहरु दुबैको ब्याटल निकै रोमाञ्चक समेत भएको थियो । त्यस्तै यस एपिसोडको अन्तिम ब्याटल टिम राजुका वैशाली लामा र सम्झना तामाङबिच भएको थियो । ‘हेरेको तिमीलाई’ बोलको गीतमा भएको यस ब्याटलमा वैशाली लामाले बाजी मारेर नकआउटका लागि छनौट भईन् । यता सम्झनाले पनि सुमधुर आवाजका साथमा निकै दमदार प्रस्तुति दिईन् । आदरणीय दर्शविन्द यी प्रतियोगीहरुमध्ये तपाईलाई कसको आवाज मनपर्छ ? तपाईको विचारमा फाईनलसम्म कुन प्रतियोगीहरु पुग्न सक्छन् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
यस्ता छन् छमछमीका अन्तिम ५ फाईनालिष्ट (भिडियो)